Wararka Maanta: Jimco, Mar 29, 2013-Madaxweynaha Soomaaliya oo Magaalada Dubai kula Kulmay Caawa Mas'uul ka tirsan Dowladda Imaaraadka Carabta (SAWIRRO)
Kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa: ra’iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiiradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan, wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta, Maxamuud Xasan Suleymaan, wasiir-u-dowlaha madaxtooyada Faarax Sheekh Cabdulqaadir, wasiir-u-dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda, Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya Imaaraadka Carabta, C/qaadir Sheekey Al-Xaatimi.
Intii ay wadahadalladu socdeen madaxweynuhu wuxuu ka warbixiyay horumarka dhinaca ammaanka ah ee ay Soomaaliya ku tallaabsatay, iyo dib u soo laabashada deggenaasha qaybo badan oo Soomaaliya ka tirsan.
“Waxaan doonaynaa horumar intaas ka badan iyo in deggenaashaha dalka la xoojiyo. Sidoo kale waxaa socda dib u habeyn lagu sameynayo ciidamada ammaanka. Ciidamadeennu hadda waxay ku jiraan tababar, dhawaanna waxay awoodi doonaan inay howshooda u gutaan si hufan u gutaan,” ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya.
Sidoo kale, madaxweynuhu wuxuu hadalkiisa ku daray: “Xukuumaddu waxay ku howlan tahay inay ka hir-geliso deegaanno ku yaalla dalka mashaariic loogu talogalay horumarinta adeegyada bulshada. Waxaana ka dhisaynaa deegaannadaas shan mashruuc oo kala ah: isbitaallo, iskuullo, xarumaha maamulka, saldhigyada booliiska iyo ceelal degmo walba laga hirgelinayo, si dadkeennu u helaan adeegyada aasaasiga ah.”
Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay madaxda iyo shacabka Imaaradka Carabta taageeradoodii hagar la’aanta ahayd ee ay siiyeen Soomaaliya iyo gacanta ay ka geysteen dib u heshiisiinta.
Ugu dambeyn, kulanka ayaa waxaa lagu gaaray heshiis ah in Imaaraadka Carabta ay dib uga furato Soomaaliya safaaraddeedii kaddib 22-sano oo ay xirnayd. Tallaabadan ayaa waxay muhiim u tahay xoojinta xiriirka labada dal u dhexeeya. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa si caadi ah u shaqeynaysay labaatankii sano ee lasoo dhaafay.